Slovenia Online Casino Sites - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
(243 mavhoti, avhareji: 5.00 kubva 5)
Loading ... Kubva munaJanuary 2017, kubhejera pamusika muSlovenia ndechimwe chezvinhu zvakanyanyogadzirwa munyika dzakambove dziri chikamu cheYugoslavia. Maererano nemitemo yekubhejera, chero bedzi mabhuku nemakoteti asina kugoverwa kwakasimba muSlovenia, dzimba dzebhejeni dziri munyika yose: kubva kumakosinasi epamusoro kumiganhu kusvika kune nzvimbo dzevashanyi.
Online Kubhejera muSlovenia
Kubva muna Ndira 2017 masosi epamhepo kubhejera muSlovenia anowanzo nyorwa neSlovenia nyika rotari. Kune zvakare portal Esteve inoshanda pasi pekutungamira kweSlovenia mitambo rotari. Maitiro ese ehupfumi anovavarira kukwezva vatambi vepamba, asi kuwanika kwenzvimbo dzekune dzimwe nyika online kasino iri zvakare munharaunda yeveruzhinji pasina zvirambidzo zvakakosha. Nekudaro, isu tinocherekedza mune yedu yepamhepo yekubhejera dhairekitori, izvo zvingangoita, iyi mamiriro achakurumidza kuchinja.
Sites online casino inobvuma vatambi vanobva kuSlovenia
Ona runyorwa rwepamhepo kasino nzvimbo dzinogamuchira vatambi vanobva kuSlovenia, uye vachipa mhando yepamusoro uye yakachengeteka mitambo. Pano iwe unowana zvakasiyana siyana zvevaraidzo kubva kune slot michina kune kasino mitambo inorarama kubva kune vakakurumbira software vatengesi seNetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, nevamwe vazhinji. Iwe unogona zvakare kuverenga edu ongororo yepamhepo kasino masosi, kuti uzive akanakisa epamhepo kukwidziridzwa, mabhonasi uye nzira dzekubhadhara dzinowanikwa kune vatambi vanobva kuSlovenia.
Slovenia - nyika diki hafu saizi yenharaunda yeMoscow, asi iri munzvimbo yakanaka kwazvo. Pano iwe unogona kunakidzwa nerunako rweAlps, hunoshamisa hunhu hwesango uye mahombekombe eGungwa reAdriatic. Asi vanhu vanobhejera vane chimwe chinhu chekuita mukona ino yeEurope, nekuti mumakasino mazhinji akasiyana muSlovenia.
Slovenia - zvishoma geography uye nhoroondo. Senyika yakaparadzana kubvira 1991;
Kasinasi-yakagadzirirwa pasi inobvumidzwa;
Kasinasi dzepaIndaneti dzinobvumidzwa, dzinofanirwa kuva nedare rebazi.
Zvinhu zvishanu zveLjubljana - guta guru reSlovenia, rine kero;
Nzvimbo yeSlovenia uye pfupi yakaitika kare
Iyo Republic yeSlovenia iri mumoyo weEurope. Vavakidzani venyika diki iyi iItaly, Austria, Hungary neCroatia. Guta guru izita rinodetemba - Ljubljana.
Nzvimbo Republic yakasarudzika chaizvo. Munzvimbo diki unogona kuenda kuchando, kungodzungaira nemumakomo anoyevedza anodzika pamusoro penzizi dzemusango, kuenda kunzvimbo dzinoverengeka uye kunakidzwa nemapopoma, kutora rwendo kuenda kumahombekombe eGungwa reAdriatic, kana kuenda kunzvimbo yakanyarara. yesango dema remhandara. Kune akawanda maresitoreti munzira dzakasiyana kwazvo, uye kusimudzira kukuru kwenzvimbo yekubhejera.
Nhoroondo yeSlovenia yakareba uye yakashata, pachokwadi nyika yakaumbwa chete muna1991 uye yakazivikanwa muna 1992. Zvisinei, vanhu vaigara munzvimbo iyi kare nguva yedu isati yasvika. Nhasi nyika ine huwandu hwevanhu vangodarika mamirioni maviri evanhu. Chimiro chehurumende - reparamende republic, mukuru wenyika mutungamiriri wenyika, nhasi uno Borut Pahzor. Basa rakakosha rakaitwa neMutungamiriri, parizvino akabata iyi positi Miroslav Tserar.
Slovenia iri muEU, saka mari yepamutemo ndiyo Euro. Iyo ndima yakakamurwa kuita 210 nharaunda nemaguta gumi nerimwe.
Casinos uye Kubheja muSlovenia
Kubhejera muSlovenia kunotenderwa, uye macasino ari mumaguta akati wandei: Lipica, Portorož, Nova Gorica, Kranjska Gora. Pamusoro pevagari vemuno vanonyanya kuuya pano kuzotamba vagari venyika dzakavakidzana - Austria neItari. Ehe, kubhejera - chimwe chezvinhu zvinonyanya kufarirwa nevashanyi.
Chinhu checasino Slovenia ndechekuti hapana mikana yekutamba pane hombe uye pa100-200 euros. Asi vashanyi vanogara vakawandisa. Kana iwe uchida kutamba kumateki akakwirira, zvakafanira kuzivisa vashandi veimba yekubhejera, mune iyo kesi iwe unozokokwa kune yakavanzika VIP lounge.
Nzvimbo yekutanga iri kuenda yeKubheja ndiNova Gorica, kasino pano inotoronga maratidziro. Muguta rino mune maviri emakasi makuru muSlovenia: Perla Casino & Hotel, Park Casino & Hotera. Sei mumakasino epasirese epasirese, emhando yepamusoro epamhepo pano, vashandi vasinga bvumike, gumi nemaviri emhando dzakasiyana dzemitambo yemakadhi, roulette, michina yemagetsi.
Imwe nzvimbo yekubhejera chiitiko ndeyeKanjanjka Chikomo. Kune zvakare 2-inozivikanwa makasino: Korona, Casino & Hotera Kranjska Gora. Inopa zvisiri zvakaderera pane iyo kasino yeNova Gorica.
Kuzorora muPortorož kunogona zvakare kuzvibata iwe kumutambo wemakadhi, muchina wekubheja kana roulette, guta rine 2 makasino: Casino Portorož, Grand Casinò Portoroz. Lipica, vashanyi havazoendi vasina kunakidzwa nekubhejera, vanongoshanyira Grand Casinò Lipica.
Ehezve, vashanyi vanogona kunakidzwa kwete kwete chete mutambo, asiwo hombe huwandu hwezvinwiwa. Kazhinji anomhanyisa chirongwa chekuratidzira pa kasino, saka anoperekedza, uyo asingade kutamba, anozovewo chimwe chinhu chekuita.
MuSlovenia zvakakomba vashanyi vekasino, saka nzvimbo dzinogara dzichigadzirisa. Vateveri vemitambo yemakadhi vanozofadzwa nemhando dzakasiyana, vanosungirwa kuve ne blackjack uye poker, iyo yekupedzisira ichimiririrwa nemhando dzakasiyana: oasis poker, Texas Hold'em, 7 Kadhi Stud Poker, Caribbean Poker, uye kunyange Badugi. Fans yePunto Banco zvakare haifanirwe kugumbuka. Ive neshuwa yekushanda mune dzimba dze roulette, kazhinji French.
Semunyika dzese dzeEU, shanda kasino inodzorwa nehurumende. Kana iyo institution inoshandisa kodhi yekupfeka uye zera muganho, vanokurudzirwa kudzidza vasati vashandisa kushanya.
Mitambo yeIndaneti muSlovenia
Slovenia - nyika yemazuva ano, saka pano inoridzwa kwete chete mukasino chaiyo, asiwo mune chaiyo. Muna 2014, mutemo mutsva, unogadzirisa zviitiko zvevashandisi, wakaunza yakakosha yekudzora knob, iri pasi peMinistry yeMari.
Uchishandisa online kasino iyo inogona kuvimbwa nayo, kubvira kutanga kwebasa ivo vanofanirwa kuwana rezinesi kwemakore mashanu. Uye kuti vakunde muyedzo, ivo vanocherekedza inoshamisa rondedzero yemamiriro ekumanikidza. Naizvozvo, kuchengetedzeka uye kubvisa mari usanetseke. Nezve kunyanya kunetsekana Luxury Casino, Royal Panda Casino, All Slots Casino, Betvictor Casino, Betway Casino nevamwe vazhinji.
Triple Bridge. Kero: Tromostovje, Ljubljana. Iyi yakaisvonaka ensemble, yakaverengerwa pakati pezvivakwa zvemunyika, ine 3 mabhiridho evanofamba netsoka, akakandwa mhiri kwerwizi rweLjubljanica. Pfuura nepabhiriji panogona kunge chiri muchikamu chekare cheguta, rakavharika kune traffic.
Tivoli Park. Kero: Tivoli Park, Ljubljana. Iyo paki hombe yeguta guru, yakapararira kuchamhembe-kumadokero kwenzvimbo yenhoroondo. Panharaunda yemahekita mazana mashanu iri pakanangana nepaki yeTivoli ine arboretum, dziva neminda, chikomo uye chikomo cheRoznik Cone.
Cathedral yaSt. Nicholas. Kero: Dolničarjeva ulica, 1, Ljubljana. Iyi Cathedral yeArchdiocese yeLjubljana, yakavakwa mukuremekedza Nicholas weMyra. Kuvakwa kwechivako chenyika kwakatanga muna 1361 uye kwakapedzwa chete muzana ramakore reXVIII.
National Garari yeSlovenia. Kero: Puharjeva ulica 9 1000 Ljubljana. Uyu ndiwo musamu mukuru wehunyanzvi muSlovenia, yakavambwa muna 1918. Pano paunganidzwa muunganidzwa wakanakisa wemifananidzo kubva kuMiddle Ages.
National Museum yeSlovenia. Kero: Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana. Iyi yekare miziyamu yenyika yakaunganidza zvakawanda zvekuchera matongo, zvinhu zvekushongedza hunyanzvi, kudhinda, kudhirowa, mari.
Chokwadi chinofadza pamusoro peSlovenia neSlovenia
Slovenian - mutauro wekare weEuropean, ichiri iine iyo mbiri nhamba.
VeSlovenia vanomuka mangwanani ndokuenda kunorara mangwanani, mushure memaawa e22, nyika iri kutozorora.
MuLjubljana, anorarama 13% yevanhu.
Hafu yenharaunda - sango, uye maviri-matatu - matura.
Slovenia ndiro bako rinonyanya kushanyirwa muEurope - Postojna, chimwe chikamu chetunnel dzakagadzirirwa musungwa weRussia.
MuLipica na1580 inomhanya purazi repurazi, iro rinorima lipitsianov - mabhiza asingawanzo, akapiwa matare ehumambo eEurope.
Slovenia - imwe yenyika dzichikurumidza kusimukira muEurope, kune yakakwira kwazvo Index Yekuvandudza Kwevanhu - 0.892, uye iri kuramba ichikura.
Slovenia pamepu yeEurope
0.1 Online Kubhejera muSlovenia
0.2 List kuti Top 10 Australian Online Casino Sites
2.1 Sites online casino inobvuma vatambi vanobva kuSlovenia
3 Kubhejera muSlovenia
3.0.1 Nzvimbo yeSlovenia uye pfupi yakaitika kare
3.1 Casinos uye Kubheja muSlovenia
3.2 Mitambo yeIndaneti muSlovenia
3.2.2 Chokwadi chinofadza pamusoro peSlovenia neSlovenia
3.2.3 Slovenia pamepu yeEurope
hapana dhipoziti bhonasi kodhi ruby ​​slots